Ideas de paleta de colores Nhanganyaya yeRudzi Palette
Nhanganyaya yeRudzi Palette
Ruthless Ruvara Palette Akadzvinyirira Strategies
Muzhinji, zvepepuru inosanganiswa neuchenjeri, kusika, kuzvimiririra, mashiripiti uye chakavanzika. Kuve nepepuru pasi pedu (nehunyanzvi) kudzora kunoita sekunge kwainetsa. Green kuraira nezvehutano nemari, uye yepepuru inoratidza huchenjeri, humambo uye nekuremekedza. Wepepuru yangu haisi yepepuru yako. Nekuti yepepuru yakagadzirwa nekubatanidza yakasimba kudziya uye inotonhora mavara, inochengetedza zvinhu zviviri. Iyo ruvara rwepepuru haruwanzo kuitika muchisikirwo uye, semhedzisiro, inowanzoonekwa seshoko dzvene. Wechipiri ruvara rwepepuru (inowanikwa pakati petsvuku nebhuruu mune vhiri vhiri) uye mumvuri wegrey uri kunyunguduka ese ari maviri epakati bhuruu uye inodziya tsvuku yepakutanga inotonhora pamwe chete.
Pamusoro Ruvara Palette Sarudzo
Paunongoisa iwo mavara, uye vanhu vanoziva nezve yako mhando, iwe unowanzo rangarira iyo kune iyo ruvara. Vazhinji vanhu vangati bhuruu ruvara rwavo rwavanofarira. Sezvo iri ruvara rwunodiwa nevanhu vazhinji, unogona kukurumidza kufadza vateereri vakawandisa. Mavara akareruka akanakira kumberi aine rakasviba kara mavara ezvinyorwa zvacho. Yakakwana kune mavara mavara, inoda kuita, kana chero kwavanoda kuti vatariswe nevanhu. Pakupedzisira, ivo vanogadzira mavara eruzivo akaratidzika sepasina kufarirwa nevakawanda.
Ruvara phaleti – iyo Nhau
Ungasarudza sei ruvara rwakakodzera rwechishandiso chako Ungasarudza sei ruvara rwakakodzera rwechishandiso chako Ziva mafungiro evateereri Kunyange mamwe mavara aine chirevo pazvinhu zvakasarudzika. Mavara echinhu anofanirwa kunge achibatirana pamwe nezvirimo zvemashandisirwo uye chinangwa. Ruvara rusina kusarudzika zvinoreva iko kushandisa kwako runogona kukonzera mhedzisiro yakaipa.
Ungatanga sei iyo Ruvara Palette?
Vanhu vanoona ruvara pakutanga, saka zvese zvimwe ndezvechipiri. Ehe, iwe unoda kusarudza iwo mavara aunonyatsoda. Ruvara rune chimiro chekunze chinoita mukati kuti chinoita kusangana kwaro muchisikwa kwakawanda kwazvo. Mamwe mavara anogona kuchinja manzwiro edu, kana kutokuvadza mamiriro edu epanyama. Iyo yakakwana inoenderana nemuvara uye uzivi ichave inozvishambadzira chishandiso kune yako kushandisa.
Nhoroondo yeiyo Refuted Rudzi Palette
Kana vashanyi vatsva vachigara pane yako blog, izvo zvekutanga zvinhu zvavanodudzira mavara. Kushandisa ruvara kupa simba mukamuri, imba kana hofisi chivakwa inzira iri nyore yekuvandudza simba mune yako nharaunda uye kunyanya mauri. Izvo zvinoshandiswa nehunyoro kupenya nemaune kutenderera kuzere nyika. Iwo mavara echiratidzo chekushandisa anofanirwa kuratidza kushandiswa kwekushandiswa kukuru uye zvakajeka.
Maitiro ekusarudza Rudzi rwePalette
Kugadzirisa yako kicheni ruvara Palette hakufanire kuve yakawedzera orexpxp. Palette yemavara ndeyekusarudzwa kwemaviri kana matatu mavara anogona kushandiswa kwese kwese mhando yako. Paletera yedu yemavara inopa pamberi pekubatana mune zvese zvinoburitswa, zvinosanganisira zvakadhindwa, zvinhu zvekusimudzira uye nzvimbo online. Iwe unofanirwa kutsanangura yako pendi yepende uye kuyera mavara kune matatu. SECONDARY color Palette PALETTESA ruvara rutsigiro inobvumidzwa nekushandiswa kushoma.
Tevere, ini ndichatsanangura nzira dzaunofanirwa kushandisa kushandisa iyo mifananidzo yemavara kutora seinotevera:
1. Dzvanya Sarudza “Sarudza mufananidzo wako”, wobva wasarudza mufananidzo waunoda kuziva iwo mavara kodhi uye mutoro.
Nyora zita remufananidzo mukoramu isina chinhu, mushure me “Enter zita remufananidzo”
3. Zvadaro tinya pane “Tumira”
Mushure meizvozvo, iyo yakakurumbira kutevedzana kwemavara, mienzaniso yemavara, hexadecimal mavara, RGB mavara uye mavara mavara akakwana uye akazara petafura.
Sei ?? Zviri nyore, handiti?
Edza kukanda mifananidzo yakawanda sezvaunayo. Uye cherekedza mhedzisiro yemasanganiswa emhando yakagadzirwa mu tafura. Mufananidzo iwo wamakadzidzisa unoratidza iwo ese makuru mavara, iyo hexadecimal color, iyo RGB ruvara uye zvakare zita reruvara.
Esta "Nhanganyaya yeRudzi Palette" el gráfico tiene 20 colores dominados, que incluyen . Hace una combinación de colores tan hermosa inspirada en esta imagen.